बालुवाटारको ‘थुना’ मा हुँदा उड्यो कोरियन एयर - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइराला असार २४
क्यानडा हिँडेकाे प्रडा काेइरालासहितकाे टाेली
यो निकृष्ट व्यवहार कांग्रेस भएकै कारण गरिएको हो भने त्यो सभ्य समाजलाई सुहाउने कुरा होइन।
यो सम्मेलनको आयोजक त्यहाँस्थित ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालय हो। संस्कृति भाषासम्बन्धी त्यो १७ औं विश्व सम्मेलन हो। सोही सम्मेलनको एउटा वक्ताको रुपमा म छनौट भएर शनिबार त्यसतर्फ जान लागेको थिएँ। संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकूलपतिका हैसियतले सम्मेलनको अन्तिम सत्रको अध्यक्षता मैले नै गर्दै थिएँ।
विश्वविद्यालयका निर्देशक काशीनाथ न्यौपाने, सहप्राध्यापक नवराज कट्टेल, बाल्मीकि विद्यापीठका प्रमुख गणेश घिमिरे, सहप्रध्यापक लेखप्रसाद निरौला, उपप्रध्यापक प्रेमराज न्यौपाने र उपप्रध्यापक केशव कोइरालासँगै म विमानस्थल पुगेको थियौं।
विमानस्थल 'चेकइन' र अध्यागमन चेकजाँचमा समय लाग्ने हुनाले हामी निर्धारित उडान समय ५ः२५ भन्दा केही अगाडि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ पुग्यौं।
संस्कृत भाषा हाम्रो गौरवको विषय रहेकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा क्यानडा जान लागेको थाहा पाएर हाम्राे भ्रमण दललाई विदाई गर्न जयतु संस्कृतका पदाधिकारी विमानस्थलमै आइपुग्नुभयो। उहाँहरुले हामीलाई फूलको माला लगाएर विदाई गर्नुभयाे। माला लगाएर विमानस्थल प्रवेश गरेका हामीले लगेजको सुरक्षा जाँच गरायौं। त्यसपछि बोर्डिङ पास लिन कोरियन एयरको काउन्टर गयौं। नजिक पुग्नै लाग्दा एक बर्दीधारी प्रहरीले एकैछिन काम छ भनेर मलाई बोलाए। युनिफर्म लगाएका तीन प्रहरी मलाई लिन आएका रहेछन्।
विमानस्थलकै प्रक्रियासम्बन्धी केही अन्य काम होला भन्ने ठानेँ। उनीहरुले विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख कमल घर्ती भन्ने मान्छेसँग भेट गराए। उनले नम्र श्वरमा आग्रह गरे, ‘तपाइँलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेट्न बोलाउनु भएको छ।’
विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन हिँडेकाे म प्रहरीको व्यवहारबाट केही सशंकित भएँ। उनले फेरि आग्रह गर्दै भने, ‘हिँड्नुहोस् बालुवाटार जाउँ।’ प्रहरीले मलाई फर्काउनुको लिखित कारण देखाएनन्। पक्राउ पूर्जी पनि दिएनन्। प्रहरीको आग्रह मैले नकार्न सक्ने स्थिति थिएन। प्रहरी नियन्त्रणमै मलाई बालुवाटार पुर्याइयो। चेकजाँच भइसकेको मेरो लगेज पनि झिकियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्याएर एउटा कोठामा राखियो। त्यहाँ एक जना आएर कूलपतिजी व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर बस्दै गर्नुहोस् भने। म बालुवाटारको त्यो कोठामा करिब एक घण्टा बसेँ। प्रधानमन्त्री निवासमा मलार्इ एक किसिमकाे 'ह्युमिलेसन' गरिएकाे थियाे। एक घन्टा जति पर्खिएपछि एउटा सूचना सुनाइयो, ‘कूलपतिजी आज व्यस्त हुनुभयो। हजुर घर जानुभए हुन्छ।’ यो सूचना त्यतिबेला दिइएको थियो जतिबेला कोरियन एयरको केइ ६९६ उडान त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोलका लागि उडिसकेको थियो।
एउटा प्राज्ञिक मान्छे बाैद्धिक सम्मेलनमा सहभागी हुन जान लाग्दा मलाई किन नियन्त्रणमा लिनुपर्याे? किन विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइयो? बालुवाटारको कोठामा किन बन्दी बनाइयो? यी प्रश्न तपाइँहरु सरकारलाई नै सोध्नुहोस्।
संस्कृत विश्वविद्यालयले सन् २०२४ मा विश्व संस्कृत सम्मेलन नेपालमा आयोजनाको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसका लागि हामीले ‘लेटर अफ इन्ट्रेस्ट’ पठाएका थियौं। यसमा अरु देशका सरोकारवाला संस्थाहरुले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन्। यो सम्मेलनमा हामीले त्यस विषयमा छलफल गर्ने र मैले मेरो प्रस्तुति दिने निश्चित थियो।
२०७४ मंसिरमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसँग लिखित रुपमा छलफल भएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले सम्मेलन आयोजनाका लागि ३५ लाख प्रस्तावसहितको पत्र अर्थमन्त्रालयमा पठाएको थियो। विश्वविद्यालयले ४० लाख मागेकोमा मन्त्री श्रेष्ठले ३५ लाखले पुग्ने भन्दै रकम प्रस्ताव गरेका थिए। अहिलेको सरकारले १० लाख दिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले टिप्पणी आदेश दिएको भन्ने बुझेको छु।
क्यानडा भ्रमणको विषय विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट प्रस्ताव पास गरेका थियौं। कानूनअनुसार मैले कूलपतिलाई जानकारी गराउन सहउपकूलपतिमार्फत पत्र असार १५ मा मन्त्रालयमा दिएको थिएँ। एकाएक अपहरण शैलीमा नियन्त्रणमा लिनु भनेको कम्युनिष्टहरुको संस्कृतप्रतिको हीनभावना हो। म लोकतन्त्रका लागि बारम्बार लडेको र जेलनेल भोगेको मन्छे हुँ। करिब ८ वर्ष काराबास बसेको छु। सरकार विधिसम्मत, नियमसम्मत तरिकाले चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। मलाई विमानस्थलबाट अपहरणशैलीमा नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के हो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ मैलेभन्दा सरकारले तपाइँहरूलार्इ दिनुपर्छ।
सरकारले देशमा संस्कृत सम्मेलन रोक्न मेरो अपहरण गरेको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाई छ। हिजो पनि लडेर आएको मान्छे हुँ, अब पनि लड्नेछु। हो, मलाई कांग्रेसको सरकारले नियुक्त गरेको हो। तर यो निकृष्ट व्यवहार कांग्रेस भएकै कारण गरिएको हो भने त्यो सभ्य समाजलाई सुहाउने कुरा होइन। देशमा संस्कृत विश्वविद्यालय रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने महान अवसर हामीले गुमाएका छौं। मेरो संविधान प्रदत्त स्वतन्त्र भएर हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार पनि खोसिएको छ।
प्रकाशित २४ असार २०७५, आइतबार | 2018-07-08 14:38:23
प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइराला संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति हुन्
प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाबाट थप
छानबिन समितिको निष्कर्षः मन्त्रीकै ‘उस्काहट’ मा मन्त्री-सचिव कुटाकुट